वि. सं. २०७८ जेठ २७ गते, बिहीवारको राशिफल - Enepalese.com
वि. सं. २०७८ जेठ २७ गते, बिहीवारको राशिफल
इनेप्लिज २०७८ जेठ २७ गते १:५४ मा प्रकाशित
वाहन चलाउँदा र विशेष गरेर घुमाउरो बाटोमा होसियार हुनुहोस्। कसैको लापरवाहीले तपाईंलाई समस्यामा पार्न सक्छ। लामो अवधिको लाभको लागि स्टक र आपसी धन लगानीमा सिफारिस गरिन्छ। आज तपाईं उपस्थित हुने एउटा सामाजिक सभामा आकर्षणको केन्द्र बन्नु हुनेछ। आफ्नी प्रियतमासंगको तपाईंको लापरवाह व्यवहारले घरमा परेशानी ल्याउन सक्छ। तपाईंले आज साना तर महत्त्वपूर्ण नसकेका निकै कामहरू पूरा गर्न सक्नु हुनेछ। आफ्नो जोडीका आफन्तहरूले तपाईंको वैवाहिक परम आनन्दमा बाधा पुर्याउन सक्छन्।
आराम गर्नुहोस् र कामको बीचमा सकेसम्म धेरै आराम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईंले प्रेम गर्नेहरूसँगको गलतफहमी समाधान हुनेछ। तपाईंले आफ्नो प्रियको काखमा खुशी र चरम आनन्द प्राप्त गरेकोले आफ्नो काममा तपाईंले सान्त्वना पाउनुहुनेछ। साहसपूर्ण कदम र निर्णयले अनुकूल परिणाम ल्याउनेछ। आफ्नो जोडीको स्वास्थ्यले तपाईंलाई चिन्तित राख्न सक्छ।
तपाईंले निर्णय गर्नु परेमा अरू मान्छेको भावनालाई विशेष ध्यान दिनुहोस्। तपाईंको कुनै पनि गलत निर्णयले तिनीहरूलाई मात्र गहिरो असर गर्दैन, तपाईंलाई पनि मानसिक तनाउ दिन्छ। बच्चाहरुले आफ्नो उपलब्धिले तपाईंलाई गर्व महसुस गराउनेछन्। अनपेक्षित रोमान्टिक झुकाव हुनेछ। नयाँ परियोजनाहरू र योजना लागू गर्न राम्रो दिन। आज आफ्नो जोडीले तपाईंलाई स्वर्ग पृथ्वीमा नै छ भन्ने महसुस गराउने छन्।
खुशीको समाचार प्राप्त हुन सक्छ। तपाईंले जानेका मानिसहरूको माध्यमबाट आयका नयाँ स्रोतहरू उत्पन्न हुनेछन्। तपाईंमाथि आज नराम्रो भावना राख्नेहरूले पनि कुरा सपार्न खोज्छन् र तपाईंलाई आफ्नो बनाउने प्रयास गर्नेछन्। तपाईंले आफ्नो प्रियको काखमा खुशी र चरम आनन्द प्राप्त गरेकोले आफ्नो काममा तपाईंले सान्त्वना पाउनुहुनेछ। तपाईंलाई आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्ने राम्रो मौका प्राप्त हुनेछ। आज, आफ्नो जीवनसाथीले तपाईंलाई आफ्नो जीवनको सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरामा सहयोग दिनेछन्।
तपाईंको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन सक्ने कुरामा काम गर्ने लाभदायी दिन। लामो अवधिको लाभको लागि स्टक र आपसी धन लगानीमा सिफारिस गरिन्छ। कार्यालयको काममा धेरै संलग्न भएकोले आफ्नो जोडी/पत्नीसँगको सम्बन्ध तनाउपूर्ण हुनेछ। तपाईंको कार्डमा तलाउमा सुन्दर बास भेट्ने सम्भावना उँचो छ। कुनै पनि संयुक्त उद्यममा प्रवेश नगर्नुहोस् – किनकि साझेदारहरूले तपाईंको फाइदा लिने प्रयास गर्नेछन्। यो दिन तपाईंका वैवाहिक जीवनको सबै भन्दा राम्रो दिन हुन सक्छ।
तपाईंलाई रोमाञ्चक र तनाउमुक्त राख्ने गतिविधिहरुसँग संलग्न हुनुहोस्। तपाईंको अव्यावहारिक योजनाले धनको कमी गराउनेछ। तपाईंको अत्यधिक ऊर्जा र अथाह उत्साहले अनुकूल परिणाम ल्याउनेछ र घरेलू तनाउ सुधार्नेछ। तपाईं रोमान्टिक विचार र विगतका सपनाहरूमा हराउनु हुनेछ। तपाईंले आफ्नो बुद्धि र प्रभाव कामका कुराहरू मिलाउने विषयमा लगाउनु आवश्यक छ। आफ्नो जोडीले आज तपाईंलाई खुसी बनाउने प्रयास गर्नेछन्।
आफ्नो वजनमा ध्यान दिनुहोस् र धेर नखानुहोस्। आज तपाईंको बाटोमा आउने नयाँ लगानीका अवसरको अन्वेषण गर्नुहोस् – तर यी परियोजनाहरूको समर्थता अध्ययन गरेर मात्र प्रतिबद्ध हुनुहोस्। तपाईंका प्रियजनहरू खुसी छन् र तपाईंले साँझको लागि तिनीहरूको लागि केही योजना गर्नु पर्छ। मित्रता गहिरो हुँदै गएपछि रोमान्स आफैं त्यहाँ आउँछ। कुनै पनि संयुक्त उद्यममा प्रवेश नगर्नुहोस् – किनकि साझेदारहरूले तपाईंको फाइदा लिने प्रयास गर्नेछन्। तपाईंले आफ्नो वैवाहिक जीवनका विवाहपूर्व, लखेटाई, र फकाउने आदि पुराना सुन्दर दिनहरूको सम्झना गर्नु हुनेछ।
तपाईंको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन सक्ने कुरामा काम गर्ने लाभदायी दिन। अनुमान वा अनपेक्षित लाभ मार्फत वित्तीय स्थितिमा सुधार आउनेछ। तपाईंको अत्यधिक ऊर्जा र अथाह उत्साहले अनुकूल परिणाम ल्याउनेछ र घरेलू तनाउ सुधार्नेछ। आजको दिन खुशी र आनन्दले भरिएको सुंदर सन्देशले भरिएको छ। तपाईंको कडा परिश्रमले आज काममा रंग देखाउनेछ। समस्याको शीघ्रतापूर्ण कार्य गर्ने क्षमताले तपाईंको पहिचान बनाउनेछ। आफ्नो जीवनमा आज विवाह सर्वश्रेष्ठ स्थानमा पुग्नेछ।
व्यस्त समय भए तापनि स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। आर्थिक सुधार निश्चित छ। परिवार र साथीहरूसँग रमाइलो समय बित्नेछ। प्रेममा निराशा हुन सक्छ तर मन नमार्नुहोस् किनभने प्रेमीहरू जहिल्यै चापलूस हुन्छ्न। नयाँ परियोजनाहरू र योजना लागू गर्न राम्रो दिन। कर र बीमाको विषयमा केही ध्यान दिनु आवश्यक हुनेछ। आफ्ना जोडीको नराम्रो स्वास्थ्यले तपाईंको काममा रोकावट उत्पन्न हुन सक्छ, तर तपाईं कुनै पनि तरीकाले सबैको व्यवस्था गर्न सक्नु हुनेछ।
मनोरञ्जन र आनन्दको दिन। परिवारका सदस्यहरूलेको हंसमुख प्रकृतिले घरको वातावरण रमाइलो हुनेछ। आज समय, काम, पैसा, साथीभाइ, परिवार, आफन्त; सबै एक पक्षमा र आफ्नो साथीसँग तपाईं अन्य पक्षमा, सबै एक-अर्कामा हुनेछन्। सही दिशामा गरेका निष्कपट प्रयासहरूले निश्चित नै राम्रो पुरस्कार प्रदान गर्नेछ। विवाहित जोडीहरू सँगै बस्छन्, तर यो सधैं रोमान्टिक हुँदैन। त्यसैले आज साँच्चै रोमान्टिक हुन गइरहेको छ।
आराम गर्नुहोस् र कामको बीचमा सकेसम्म धेरै आराम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। आफ्नो व्यवहार उट्पट्याङ्ग नबनाउनुहोस् – विशेष गरि आफ्नो जोडीसित – अन्यथा यसले घरको शान्ति बिगार्न सक्छ। तपाईंका जोडीको स्वास्थ्य नराम्रो हुनाले आज प्रेममा बाधा पर्नेछ। कार्यस्थलमा वरिष्ठ साथै सहयोगिहरुबाट समर्थन प्राप्त हुनाले तपाईंको हौसला बढ्नेछ। आफ्नो जोडीको कठोर व्यवहारले गर्दा तपाईं दिनभरि उदास रहन सक्नु हुनेछ।
आफ्नो शारीरिक तन्दुरूस्ती कायम गर्नको लागि तपाईंले आज केही खेल गतिविधिहरूको आनन्द लिने सम्भावना छ। घरमा केही परिवर्तनले तपाईंलाई अत्यधिक भावुक बनाउनेछ – तर तपाईं प्रभावकारी ढंगले तपाईंको कुरा बुझ्ने मानिसहरूलाई आफ्नो भावना प्रकट गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। आफ्नो प्रेमीसँग बाहिर जाने हुँदा आफ्नो उपस्थिति र व्यवहार स्वाभाविक राख्नुहोस्। आज सुरुदेखि अन्तसम्म काममा तपाईंले आफुलाई ऊर्जावान महसुस गरिरहनु हुनेछ। आफ्नो ठूलो भरोसाको फाइदा लिएर बाहिर जानुहोस् र केही नयाँ सम्पर्क र मित्र बनाउनुहोस्। यो दिन तपाईंका जीवनको वसन्त जस्तै छ; रोमान्सले पूर्ण, तपाईं र तपाईंको जीवनसाथी।